ikhaya » iindaba » IPARTONI UMongameli kunye ne-CEO u-Elisabetta Cartoni Ekhethwe njengeLungu eliManyeneyo kwi-ASC
IPARTONI UMongameli kunye ne-CEO u-Elisabetta Cartoni Ekhethwe njengeLungu eliManyeneyo kwi-ASC
I-ROME- Cartoni (SpA) namhlanje ivakalisa ukuba u-Elisabetta Cartoni, uMongameli wenkampani kunye neGosa eliLawulayo eliLawulayo, wamkelwe njengeLungu eliManyeneyo le-American Society of Cinematographers (ASC).
Ubulungu obumanyeneyo kwi-ASC, umthonyama omdala oqhubekayo wokusebenza ngomfanekiso kwihlabathi, uthathwa njengelungelo elikhulu. Ubulungu bunikezelwa ngokumenywa kuphela kwaye kusekelwe kwiminikelo yomntu kwishishini lesithombe sokunyuswa ngokubanzi kunye nakwi-cinemografer ngokukodwa. Okwangoku, kunamalungu angama-200 amanxulumano emhlabeni wonke. Ubulungu bukaCartoni buxhaswe nguJon Fauer ASC, uMongameli we-ASC u-Kees Van Oostrum, uDante Spinotti ASC, i-AIC, kunye nokucebisa nguGarrett Brown.
"Kuyinto ehloniphekileyo ukukhethwa ukuba ubulungu kwi-ASC," kusho uCartoni. "Ndiyaziqhenya kakhulu ngokujoyina abaculi abanamakhono abanamakhono kunye nabalingane bezoshishino beli qumrhu elidumileyo eligama elifana nezobugcisa bezobugcisa."
U-Elisabetta Cartoni uyintloko yeenkampani zaseRoma ezisekelwe kwiinkqubo zenkxaso yekhamera. Abadlali beeCinematographer kunye nabanye abaqeqeshi bekhamera emhlabeni jikelele basebenzisa i-Cartoni iintloko zamanzi, i-tripods, izithambiso kunye nezinye izinto ezizodwa ekuveliseni imifanekiso eshukumisayo, iincwadi zethelevishini kunye neendaba.
IPARTONI (SpA) yinkampani yenkcubeko yasekhaya eyisekwe kwi-1935 nguyise ka-Elisabetta, uRenato Cartoni, uMlawuli we-Italy Institute of State of Cinematography. Uyise, uGuido Cartoni wayekhokele inkampani iminyaka engaphezu kwamashumi amane, kwaye wakhuthaza ukuba abe yinkokeli yoshishino. Imizamo yakhe yoovulindlela ekwakheni iinkqubo zenkxaso yekhamera yabonwa ngokufumana amabhaso e-servites kubandakanya i-AMPAS yeScientific and Technical Achievement Award, ii-Awards Technical Technical Awards kunye ne-SOC Technical Achievement Awards.
Ekubeni i-1990, phantsi kwesikhokelo sika-Elisabetta, inkampani iyaqhubeka ikhula ngokusebenzisa isithethe sezinto ezintsha. Okwangoku iphethe ngaphezulu kweelungelo le-35 lobugcisa bekhamera kwaye lijongwa nedumela elizwe ngamazwe ngokuthembeka, ukusebenza kunye nobunjineli obugqwesileyo. Ukuzibophezela kwakhe ekunikezeni i-cinematographers zehlabathi ngobugcisa obukhangele phambili uye wanceda ukuqinisa indawo kaCarton hollywood Kuluntu.
Ukubonakalisa ubugcisa bobugcisa kwinkxaso yekhamera,IPARTONIUnika uluhlu lwemveliso olubanzi kumashishini. Iminyaka eyi-80 yolwazi kunye namava, izisombululo ezintsha, ubuchwephesha obunelungelo lobunikazi kunye nokunyamekela kokukhonza uqeqesho kwiimeko zonke zokudubula kunye nayiphina ikhamera, yenzaIPARTONINgokufana nokugqwesa kwiinkxaso zekhamera.IPARTONINjengamanje athunyelwa ngaphandle kweRoma, kwikomkhulu layo laseNtaliyane, kwii-65 kumazwekazi kumahlanukazi, kunye nenethiwekhi yee-ejenti kunye nabasasazo bakhonza bonke abasebenzisi belizwe jikelele.IPARTONIInjongo yokuqinisekisa ukuba i-cameraman iyona nto inokuthenjwa kakhulu, inkululeko kunye nobuchule kuyo nayiphi na imeko.
IPARTONI SpA - NgeGiuseppe Mirri 13 - I-Rome 00159 (Rm) I-Italy - Ph + 39 064382002 Www.cartoni.com
Iikhamera zesebe Cartoni I-movie Abantu ekuhambeni ITeknoloji yeTV	2017-05-30
Previous: I-Bannister Ichibi ikhupha Iinkcukacha zezeMali kunye neMidlalo kuLuntu
next: I-Cisco ivula isixazululo seSisombululo seNkcazo yeHlabathi kwi-Intanethi!
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "IKARTONI UMongameli kunye ne-CEO u-Elisabetta Cartoni ekhethwe njengelungu elidibeneyo kwi-ASC". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/cartoni-president-ce-elisabetta-cartoni-selected-as-associate-member-in-the-asc/. Enkosi.